Kobo uphonononge iFom Kobo's new 8 "ereader | Zonke iReaders
Uphononongo lweKobo Forma
Inkqubo ye- UKobo Forma umfundi omtsha we-8 ″ uKobo ereader kwaye sibe nelungelo lokuba neentsuku ezimbalwa ukuyivavanya. Nalu uhlalutyo lwethu, lwe-ereader efuna ukulawula icandelo labafundi abafunda ngoku bekhula ngokuxhaphakileyo.
Ndiyithande imbonakalo… Zimbini izinto ezibalaseleyo xa sijonga okokuqala kwiKobo Forma: Iscreen sayo esingumlinganiso esi-8 its kunye noyilo lwe-asymmetric kunye nephaneli esecaleni. Isisithethi esikhulu, sabathandi bale fomathi kwaye sinayo ixabisa i- € 279,99. Ayibizi, kodwa abo bafunda okuninzi baya kuzuza kuyo.
Masibone iimpawu emva koko siqhubele phambili kwizinto ezinomdla ngakumbi
3.2 Ubeko lwephepha lamaqhosha ukujika kunye namandla iqhosha
4 Izibane, iimenyu kunye nebhetri
5 IKobo forma vs Kobo Aura One
6.1 Eyona nto ibhetele
6.3 Okubi kakhulu
7 Ifoto yegalari
8, I-E inki Ileta HD.
Isigqibo: HD / 300 dpi (1440 x 1920)
I-160 x 177,7 x 7,5 mm kwindawo yokubambelela kunye ne-4,2 mm kwicala elincinci
802.11b, 802.11g okanye 802.11n kunye ne-WEP, WPA kunye ne-WPA2 yokhuseleko
Ukukhuselwa kwe-IPX8, ukuntywiliselwa ukuya kuthi ga kwiimitha ezi-2 kwimizuzu engama-60 emanzini
Iifomathi zefayile ezixhaswayo ezili-14 (EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR)
Ixabiso le- € 279,99
Ukupakishwa kweKobo Forma kufana kakhulu noko siqhelene noko kwizixhobo eziphezulu zokuqina. Ibhokisi eqinileyo onokuyisebenzisa njengemeko yokugcina. Ngeli xesha inokuvula okungaphambili ngemagnethi, ngokungathi yincwadi ebonakalayo oyivulayo embindini. Kwaye umazibuthe unoxanduva lokugcina ibhokisi ivaliwe xa siyigcina. Ngokukhawuleza kwaye iluncedo, nangona ingabanjwanga kakuhle, isixhobo sinokuvula kwaye siwe.
Njengoko besitshilo ekuqaleni, iKobo Forma ibonakala ubukhulu bayo kunye noyilo olugqwesileyo. Kwaye i-8 ″ ithathwa kwisixhobo esikwi-160 x 177 isikwere ngakumbi kunabafundi esiqhele ukubabona kwaye inyani kukuba iyifomathi entle kwaye emnandi.
Ikwaqaqambisa uyilo lwayo lweasymmetrical, kunye nephaneli yeqhosha esecaleni kunye nokujikeleza okuzenzekelayo, ilungele bobabini abasebenzisi basekunene nabasekhohlo. Akunakwenzeka ukuthetha malunga noyilo lwe-asymmetrical ngaphandle kokukhankanya i-Oasis yohlobo. Ndicinga ukuba uyilo lwe-Oasis luye lwafika kuthi sonke. Kodwa apha ndiphule umkhonto kuKobo. Ukuba kukho into elungileyo, kufuneka ifakwe, nokuba ukhuphiswano luyenzile na ngaphambili. Njengobuhlobo ngoku bongeza ukhuseleko ngokuchasene namanzi. Nantsi indlela eziqhubela phambili ngayo izixhobo. Kwimeko nayiphi na into, nangona i-asymmetry isikhumbuza i-Oasis, ayisombululwanga ngendlela efanayo njengoko siza kubona ekubambeni. I-Kobo isebenzisa uhlobo lwe-bezel ngelixa i-Oasis iyenza ukuba ibambe ngasemva.
Amanqaku angalunganga okanye abuthathaka eKobo Forma anokuvela kugcino lwangaphakathi. Kuphela yi-8Gb, yee-ebook engaphezulu ngokwaneleyo kodwa kwimeko yokufaka i-pdf okanye ii-comics kunokuba kungonelanga. Eyona nto ifanelekileyo kwisixhobo sezi mpawu ukuba i-microSD ayifakwanga, ibiya kuba malunga ne-32Gb okanye ne-64.
Elinye inqaku elilityelweyo ngumxholo weencwadi ezimanyelwayo eziya ziba nefashoni ngakumbi. Iincwadi ezimanyelwayo azinakudlalwa kwiKobo.
Ukuthambeka okuncinci sisitshixo, kuphelele. Ikuvumela ukuba uthathe isixhobo ngokhuseleko kunye nentuthuzelo esingenakuyifumana nakwisiphi na isixhobo esithe tyaba. Umahluko phakathi kokuthatha iKobo Aura One kunye neKobo Forma mkhulu kakhulu. Ndiyeke
Ukuba kuye kwafuneka ndivavanye izixhobo ezizezona zithathiweyo kuzo zonke endizizamile, ndingatsho ukuba isandla sam, kum eyona ilungileyo iya kuba yi-Kindle Oasis yakudala engasenziwanga, emva koko yiKobo Forma emva koko iOasis entsha. Kwaye kwabo banescreen esikhudlwana kune-6 ″ kum yeyona ikulungeleyo ukuyibamba.
I-Caliber Portable: Iyintoni, yeyantoni kwaye isebenza njani
Ubeko lwephepha lamaqhosha ukujika kunye namandla iqhosha
Zombini iqhosha lamandla kunye nepini yokutshaja zikwicala lokubamba. Ekuboneni kokuqala kubonakala ngathi sizokuchukumisa iqhosha lamandla ngelixa sifunda kodwa emva kokuzama kakhulu, nokuba uzama ukuyenza ngelixa ufunda, akunakwenzeka ukuba ndiyisebenzise ngaphandle kokuzimisela. Kuya kufuneka ucinezele iqhosha ngokunyanzelwa.
Amaqhosha okujika iphepha alungele ukujika kwephepha, ubuncinci esandleni sam.
Umva sele ubambekile kwi-Kobo. Njengesiqhelo, ayityibilikisi kwaye imnandi kakhulu ekuphathweni. Iseplastikhi, akukho aluminiyam okanye nayiphi na into yegolide esetyenzisiweyo.
Izibane, iimenyu kunye nebhetri
Kwinqanaba lemenyu akukho zininzi izinto ezintsha. Sisesimo seKobo. Yonke into isebenza ngokufanayo, ngokudityaniswa kwayo nepokotho, izichazi-magama zayo, njl. Inkqubo ekhululekile esebenza kakuhle. Kuyakhawuleza, nangona kukho iinkcukacha ezincinci zokucwangciswa ezinokwenza ubomi bube mnandi ngakumbi, njengokukhetha ukungqamanisa nepokotho yodidi endaweni yeakhawunti yonke okanye ukwazi ukubonisa ixesha phezulu ngelixa sifunda.
Kwinqanaba lokukhanyisa, ngokubanzi lihle kakhulu. Isikrini sonke sijongeka njengeyunifomu ngaphandle kwecala apho ukubamba kulapho ndibona khona umgca othe nkqo nge-hue eyahlukileyo, ngathi kuseleyo. Ayikhathazi, kwaye kuya kufuneka uyijonge, kodwa nantsi. Ndizamile ukuyifota kodwa khange ndikwazi 🙁
Ngokumalunga nobomi bebhetri ngalo mzuzu, ibambelele kakuhle, ndifuna ukuyicinezela ngakumbi ukubona ukuba ihlala ixesha elingakanani, kodwa emva kweentsuku ezimbalwa zokuvavanya yonke into ibonakala njengesiqhelo, ke siyakuba noluhlu lweeveki ezimbalwa Ngokuqinisekileyo, kodwa ngokuqinisekileyo kuya kufuneka sikubone ukusetyenziswa esikunikayo kwaye ngakumbi ukukhanya, ulungelelwaniso, njl.
Ukufunda i-pdf, bayakuvumela ukuba ucinezele kabini ukuze wandise kwaye ngomnwe wakho utyibilika phakathi kwamacandelo ephepha kwaye unciphise ngokucinezela kabini
Kumaxwebhu e-.CBR nawe .CBZ ungacinezela ubambe iscreen ukutyhila amaphepha ngokukhawuleza
IKobo forma vs Kobo Aura One
Ndithathe ithuba lokuthatha ifoto kunye nokuthelekisa i-Likbook Mars. Ndidinga ukubeka i-Oasis engasenayo 😉
Jonga umahluko kubungakanani kuba abafundi beklasikhi banazo izakhelo ezininzi kwaye zixande ngakumbi
Xa kuziwa ekuthatheni, njengoko besitshilo, kukhululeke ngakumbi kuneenguqulelo zeklasikhi, ngakumbi kobu bukhulu obuhlala bunzima ngakumbi ukuphatha.
I-Kobo Forma isisitya esikhulu, enye yezona zibalaseleyo kwintengiso ngoku. Isebenza ngokuchanekileyo njengaleyo uKobo ayisebenzisileyo kuzo zonke izixhobo zayo kodwa kuyilo olusebenziseka ngakumbi, ekhululekile kakhulu ukuba afunde kwaye enesikrini esikhulu kakhulu.
Njengoko besesitshilo, ayibizi, kwaye ayisiyi-ereader ekhululekile ukuba ufuna ukuyinxiba imini yonke, kodwa ukuba ujonga isikrini esikhulu lolona khetho lulungileyo olunokukuphoxa ngokuqinisekileyo.
Uyilo lwe-Asymmetric ngamaqhosha omzimba
Ukuba ufuna ukuyiphatha rhoqo, inkulu kakhulu
8Gb yokugcina ngaphandle kwekhadi le-SD encinci
Ayikwazi kumamela iincwadi zomsindo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » Uphononongo lweKobo Forma
UNacho, kuqala kwiinto zonke, enkosi uphononongo. Ndikuxelele nje, ukuba uyandivumela, ndizibonile iimpazamo. Ndibeke ezinye:
- «Ikwaqaqambisa uyilo lwayo olulinganayo» xa lungemanga.
- «Njengobunjani ngoku bongeza i-Comfortlight«… andazi ukuba kukho naluphi na uhlobo oludibanise le nkqubo yokukhanyisa. Akunjalo ne-Kindle Paperwhite yamuva, kunene?
- «Kwaye kwabo banescreen esingaphezu kwe-6 ″ kum yeyona nto intle ukubamba." iyakuba ngu-8 ″?
- Olunye uhlobo lwempazamo olungabalulekanga kakhulu: reproudcir, qeu, »akukho aluminiyam okanye nayiphi na igolide esetyenzisiweyo.
Ngokubhekisele kuphononongo ngokwalo, into oyithethileyo ekubambeni icacise lukhulu kum. Kulapho ndaye ndanamathandabuzo khona. Indenze ndathandabuza zombini isikhundla seqhosha lamandla kunye nokuthambeka kwi-bezel ke enkosi kakhulu. Kucacisiwe ukuba akukho bungozi bokucinezela ngempazamo iqhosha kwaye ukuthambekela kuluncedo ekubambeni. Ndandinayo i-Oasis 2 kwaye nangona yayikhangeleka intle kum, ndiyibonile ityibilika xa ndiyithatha. Ndicinga ukuba ukhetho olukhethwe nguKobo lukrelekrele (kwaye lubiza kancinci) kunokuba luhlobo.
Bendihlala ndinomdla malunga neKobos kodwa kunjalo, sendiqhelene nendalo yeAmazon kunye nelayibrari yayo enomtsalane ekunzima ukuyitshintsha.
Sawubona Javi, sele ndilungisile ulingano, ndithetha nge-asymmetry kuyo yonke iposi kodwa yenzeke kum kanye. I "qeu" nayo iyalungiswa.
"Kwaye abo banescreen esikhudlwana kune 6 ″ kum yeyona ikulungeleyo ukuyibamba" yilento bendithetha yona ukuba yeyona ikhululekileyo kwabo banenani elingapha kwe 6, elingu-size esemgangathweni, oko kukuthi, intofontofo ngaphezulu kwe-7 ″ Oasis okanye ezinye iigrafu ezinkulu.
Ndiyisusile into yokuThuthuzela kwaye ndiyayijonga kwakhona. Kubonakala kum ukuba ndibethile iskid, kodwa ngendibeke isandla sam emlilweni owaziswa yiPhephawhite entsha, nelinye igama kuba olu luphawu lwentengiso olubhalisiweyo ... kodwa kubonakala ngathi ulungile.
Ukucocwa emva koko uNacho.
Inye into, into entsha onayo kukuba ungabeka imvelaphi emnyama kunye neleta emhlophe ukuze ubone ukuba unokudideka apho. Ngendlela ... Ndicinga ukuba iAmazon ithatha ixesha ukukopa uKobo. Ndicinga ukuba into ethi "Comforlight" yinto entle kakhulu. Ngapha koko ezinye iilaptops inayo (njengomphezulu wam) kwaye ndinokungqina ukuba zilungile kakhulu. Ukuxinana kwamehlo kancinane.
U-Nacho olungileyo kwaye enkosi uphononongo. Ubonakala ngathi ungumfundi okhohlakeleyo ...
Andiqondi kakuhle ukuba kutheni ixabiso likumanqaku amabi. Ukuba yeyona eReader ibalaseleyo kwimarike, phantse kuyinto eqhelekileyo ukuba yeyona ibiza kakhulu. Ukongeza, isikrini sesona sikhulu kwaye yile nto ixabisa ngaphezulu. Kufana nokuthi u-55 “Télé ubiza kakhulu kuno-42”, okanye ungathi iPorsche Cayenne ibiza kakhulu kunenye imoto.
Ukusuka kwinto endiyibonayo, ziyi- € 30 ngaphezulu kwe-Kindle Oasis, enescreen esikhudlwana kunye nebhetri amaxesha angama-5 angcono (250 mAh vs 1200mAh).
Ukusuka kwinto endiyifunde kolunye uluvo malunga nelayibrari "eyoyikekayo", uKobo ubhengeze ngaphezulu kwezigidi ezi-6 zezihloko. Andicingi ukuba ndibone inani eliphakamileyo kangaka kwiAmazon ... Kwindlela elula yokukhangela, andikaboni nasiphi na isihloko eAmazon esasingekho kwiKobo (ngokuchaseneyo kufuneka sisebenze tb).
UFernando Amat sitsho
NdineKOBO FORMA kwaye "phantse yonke into" ilungile kum ngaphandle:
Ndifunde nkqo ngamaqhosha asesandleni sam sasekunene. Akukho ngxaki.
Isandla sam sasekhohlo ndibambe iForma ndiqinisekisa ukuba ubhontsi wale sandla awunyatheli kwiscreen esimhlophe, kodwa ngamanye amaxesha andishukumi kangako ukuba ndifunda ebhedini okanye ndilele esofeni. Kwaye kwenzeka ntoni? Ewe, ndingaqondanga ndenze ukuba "ukujika kwephepha" ngamanye amaxesha kudlule namaphepha aliqela. Ke kuya kufuneka ndikhangele ukuba leliphi iphepha ebelifundwa.
I-bummer kodwa kulula ukuyilungisa ngoKobo kuhlaziyo lwayo lwexesha elizayo.
NDIQONDA ukuba inkqubo yeForma, njengoko inamaqhosha amabini amakhulu, ibandakanya ukhetho lokucima (okanye ukwenza kwakhona) iphepha elijikajika ngokokushicilela kwescreen.
Phendula uFernando Amat
Uvavanyo lweBoyue Likbook Mars
UKobo Forma, isidla esikhulu esine "imilo" eyahlukileyo